Amniga Guud Ee Muqdisho Oo Niyad Wanaag Laga Muujiyay – Heemaal News Network
Amniga Guud Ee Muqdisho Oo Niyad Wanaag Laga Muujiyay
Wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in uu soo hagaagayo amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana ay ugu baaqday shacabka in ay la shaqeeyaan ciidamada.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in ammaanka magaalada uu soo hagaagay, isla markaana Wasiirada qaar ammaankooda ay ilaaliyaan labo askari kaliya sida uu hadalka u dhigay.
Magaalada waxaa ka soconaya howlgalo habeen iyo maalin ah oo ay wadaan ciidamada xasilint oo aad ku arkeyso Isgooysyada muhiimka ah iyaga oo baaraya gadiidka gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynaha.
Khubaro Qiimeyn ku Sameeysay Habka loo Bixiyo Basaboorka Somaliya Oo soo Gaadhay Muqdisho(Sawiro)
November 8, 2017 Soomaaliya
Khubaro arimaha hubinta dukumentiyada u qaabilsan dalka Norwey ayaa soo gaaray Magaalada Muqdisho si ay u arkaan hab-ka qaadashada Basaboorka Soomaliya. Imaanshaha wifdiga khubarada ayaa ka dambeysay ka dib safaro uu agaasimaha guud ee Hay’da […]
Toos U Daawo Ciyaarta Finalka Ee Dhex Mareysa Jubbaland iyo Puntland.
Waxaa garoonka Koonis Stadium ka socota ciyaarta Finalka ee dhex mareysa Xulalka Kubadda cagta ee Jubbaland iyo Puntland oo sanadkii labaad isku arkaya Finalka. Kooxda Puntland oo heysata Koobka ayaa dooneysa inay difaacato oo sanadkii […]